Ikhaya Lamaholide Elihle e-Erp eduze nasehlathini - I-Airbnb
Ikhaya Lamaholide Elihle e-Erp eduze nasehlathini
U-Tamara - BELVILLA unokuphawula okungu-4418 kwezinye izindawo.
Itholakala ezindaweni zokulondoloza imvelo e-Erp, leli khaya lamaholide elinamagumbi okulala ama-2 lizokhanga wonke umuntu othanda imvelo. Ikhaya liseduze nemizila eminingi yokuhamba izintaba nokuhamba ngamabhayisikili, ilungele ukuhlola izindawo eziseduze. Ilungele abantu abangu-5 kuya ku-6, ngokuvamile iqembu leholide lomndeni, ikhaya linengadi enhle ezungezwe izindawo ezifanele ukufakaza.
Leli khaya liseduze nendawo yehlathi lapho ungaya khona ukuze uvuselele futhi uhambe ngezinyawo zokwelapha. Isikhungo sedolobha siqhele ngamakhilomitha angu-8 ukusuka lapho ungathenga khona izinto eziyisikhumbuzo. Uma usesimweni sokuzijabulisa okuthile, ukugibela ihhashi kuqhele ngamakhilomitha angu-4.2 kuphela. Jabulela izibiliboco zasendaweni ezindaweni zokudlela njengetshe; kude futhi kude kunebhikawozi elidumile lokuthola ama-dessert.
Ukushisa kwaphansi kugcina ikhaya lifudumele futhi lipholile. Lungiselela ukudla kwe-barbecue futhi ukujabulele nabangane bakho. Kukhona indawo yokugcina ibhayisikili etholakalayo ukuvikela imijikelezo yakho. Nethezeka kuma-sun-lounger ugcagca elangeni engadini enefenisha.
Indlu iyindlu ehlukaniswe kancane (izivakashi zingahlala kwenye indlu)
I-Eindhoven Airport iqhele ngamakhilomitha angama-30.
Isakhiwo: Iphansi eliphansi: (Igumbi lokuhlala(i-TV(smart TV), itafula lokudlela, indawo yokuhlala), Ikhishi(ihobhu, igedlela likagesi, ihood, umshini we-espresso, inhlanganisela yemicrowave, umshini wokuwasha izitsha), indlu yokugezela(ishawa, indishi yokuwasha), indlu yangasese(isitsha sokugezela) , indlu yangasese), ukufudumeza(ukushisisa phansi))
Esitezi sokuqala: (igumbi lokulala(umbhede okabili(boxspring), umbhede osofa ababili), igumbi lokulala(umbhede okabili(boxspring)))
indawo yokugcina ibhayisikili, ifenisha yasengadini, izindawo zokuhlala elangeni, i-BBQ, i-parasol
4.29 · 7 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Erp namaphethelo